Duubista Dharka Laalaab La'aanta | Martech Zone
Arbacada, Maarso 5, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Halkan waxaan fadhiyaa qol hudheel ah oo ku yaal Milwaukee, Wisconsin. Kooxdayadu waxay berrito u soo bandhigayaan shirkad halkaan ku taal waxayna dib ugu laaban doonaan Indianapolis. Waxaan soo iibsaday suud cusub safarka - wuxuu iib ahaa qiyaastii 70% off mana dhaafi karin. Waa shukulaatada bunni - ugu dhow madow - oo aad u deggan. Suud kuma iibsan dhowr sano sidaa darteed nafsaddeyda waxaan kula dhaqmay dhar dhan - oo ay ku jiraan kabo sibiibixan.
Gegada diyaaradaha ee Midway waxaan wadahadal kula galay socdaal kale waxaanan sheegay in suudkaygu kujiray boorsadayda. Ninkii wuu rumaysan kari waayey inaan shandad ku haysto boorsadayda.
Xaqiiqdii, waxaan ku lahaa safarkayga oo dhan a Rasuul Bag - beddelashada dharka, laptop-ka, joornaalka, iwm. Waxaan xirtay is-daba-joogga kabaha dharka oo aan ku xirtay jiinisyadayda sidaa darteed waxaan u ekaa qof safar wanaagsan ah - runti waxay ahayd uun in meel la badbaadiyo. Iyo - way iska siibanayaan markaa waxaan uga dhigi karaa si dhakhso leh amniga. Ku Bacda Rasuulka Bacda Waxaan haystaa qolof gadaal ah oo duuduub ah oo uu 'MacBookPro' si hagaagsan ugu habboon yahay, sidaa darteed uma baahni inaan ku carqaladeeyo baakadeyda si aan u helo laptop-ka!
Markii aan ku noolaa Denver, waxaan daawaday bandhig subax ah oo nin tusay sida loo soo rogo suud si aysan u duuduubnayn. Dadku badanaa waxay keenaan boorso dhar weyn ama isku laab. Dhibaatadu waxay tahay bacda dharka oo isku laabanto, laalaabkeeduna wuxuu keenaa laalaab. Haddii aad si sax ah u soo duubto suudhka, waxaad dabaysha la wareegeysaa iyada oo aan lahayn laalaab gabi ahaanba waxaadna la jaan qaadi kartaa wax kasta.
Anigu waxaan ahay nin weyn - markaa waad qiyaasi kartaa inta suud le'eg waa in ila qaad.
Si aad u xirxirto surwaalkaaga, hubi in surwaalka la dhigey iyadoo surwaalku dhinac ka yaallo oo ay safafka la safan yihiin sidaas darteed surwaalku si fiican buu u siman yahay. Laga bilaabo dhexda, si fiican u laalaab surwaalka ilaa ay ku jiraan duub fiican. Dhig boorsadaada ama boorsadaada meel gees ah oo jilicsan oo aysan xoqin doonin.
Isku soo duub jaakadaadu waxay qaadataa xoogaa ganaax ah. Waxaad u baahan doontaa inaad si tartiib ah u foorarsato, oo aadan u laaban :), jaakaddaada si aad garbaha u soo celiso si aad isu taabatid. Sidan, duub kasta wuxuu si toos ah ugu dhacaa bartamaha dhabarka wuxuuna umuuqdaa mid dabiici ah. Si tartiib ah hoos ugu dhig gacmaha si jaantus ah hal dhinac jaakada. Uma baahnid inaad isku laabtid sida ugu badan ee aad u foorarsato. Dhamaadka darafta waa inuu ka hooseeyaa badhanka hoose ee jaakada.
Ka bilow garabka, duub jaakada kor - laakiin hubi inaadan u laalaabmin intaad sii socotid. Waa inuu ka sameysmaa duub ka dhumuc weyn surwaalkaaga, laakiin safarka ayuu si fiican ugu socon doonaa! Wax ha ku tuurin boorsada hareeraheeda ah, kaliya ku jiifso adiga oo sharaabaadyo, marada hoosta, iwm dusha kaga yaal.
Shandada ka furashada
Isla markii aad tagto meeshaad u socotay, hubi inaad boorsada kala baxdid, ka furtay suudhka, oo aad sudhatay. Waa inaad ku heshaa xaalad qumman! Waan ka xumahay ma haysto sawirro aan isbarbar dhigo - dhab ahaantii waxaan ku socdaa wadada markaa kamarad taleefanka gacanta ahi ma gooyo.
XUSUUS: Uma muuqato inaan nasiib badan ku haysto funaanadaha lebiska - sida caadiga ah waxaan hudheelka ku dhagaa iyaga oo ku dhejinaya.
Tags: Erik qualmankaftanapp mobilemobile-ka saaxiibtinimohagaajinta mobiladagoobaha mobiladaparodycaddayntacliinkacdoonka warbaahinta bulshada
Kaydinta Hal Deym si aad ugu Bixiso Dollar
Ha iloobin tilmaamahaas ku saabsan qorista si wanaagsan ama widget-yada kala duwan ee loogu talagalay barnaamijka WordPress, tani runti waa aqoon waxtar leh! 🙂
Doug, waan jeclahay moodada iyo suudhka, adigaa iska leh codka jazzy, sidee ku habboon yahay? Waxaan helaa inta badan alaabtayda oo la sameeyo, waxaan ahay 6ft2in iyo 260 lbs. Nin xirfadleydaada ah waa inuusan haysan wax kayar 3 suud oo wanaagsan oo ganacsi ah, buluug buluug ah, jaakad qotodheer, dhoollo madow iyo madow, iyo dhar aad u sinta oo taariikhahaaga kulul, Waxyaabaha isdabajooga ah, waa inaan ku qanacsanahay
Dhadhankayga dharka ayaa aad uga badan miisaaniyaddayda si aan u iibsado, JD! Suudhan gaarka ah kama saarna sariirta - markaa waxaan u baahanahay inaan galiyo harqaanle. Gacmo-gashiyada ayaa dhererkoodu yahay hal inji, laakiin wax kasta oo kale waa qurux badan yihiin. Waxaan jeclaan lahaa in jilba-joogyadu ay leeyihiin dahaadh xariir ah, suudhkayga kale ayaa leh tan oo way ka qurux badan tahay in la xidho marka loo eego labbis jiinis oo duug ah.
Isku soo wada duub wuu shaqeeyaa! Waan balan qaadayaa 🙂
Nin militeri hore ah, adigu! Waxaan bartay jawharaddan xirxirka ah markii aan ku maqnaa CA booqashada saaxiibkeyga ugu fiican ee halkaas ku sugnaa xilligaas. Waxaan xirxiranayay boorsadayda si aan guriga ugu aado runtiina way ka careysiisay. Isagaa qaatay oo duudduubay dhammaan dharkaygii oo waxay ku dhammaatay ku habboonayd saddex meelood meel meel ka mid ah booskii aan qaatay. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax millatari b / c dadka kaliya ee aan ogahay inay ku xirxirayaan qaabkan ama milateri ayey ku jireen ama saameyn ayey ku yeesheen noloshooda.
Si kastaba ha noqotee, waan isku laabay anigoo wax walba rogay tan iyo markii. Marwalba waxaan imid anigoon duuduubnayn (kuwaas oo ah caqabadda jiritaankayga) iyo qollo badan oo loogu talo galay qoomiyadaha kale. Shaatiyada dharka, in kastoo, haa, waa in badanaa lagu taabto bir.
Qoraal wanaagsan, iyo macluumaad aad u qiimo badan oo loo helo qof ganacsade ah.
Waa inaan gaboobayaa… maalinkaygii waxay ahayd 'laab & taag'. Waxba kamaanaan rogin, laakiin waxaa jiray ficil ahaan dharkayaga ka soo laalaab! Weli waxaan laalaabaa shukumaan sidii aan ku sameeyay Boot Camp mana u adkeysan karo inay laaban yihiin wax ka duwan. Murugo!
Waa inuu isku dayaa inuu rogo suudka oo uu arko inuu ka fiican yahay xirmada suud ee aan hadda isticmaalo. Khiyaamada xigta - inaan shaatiyada u geeyo meesha aan tegayo iyagoon u muuqan sidii inaan ku dhex seexday. Talooyin kasta oo taas ku saabsan, qofna?
Jun 28, 2008 at 9: 42 PM
Waxaan ka iibsadaa shaatiyada aan-birta ahayn dhulalka dhammaadkooda oo waan rogaa. Haddii ay jiraan wax laalaab ama duleelo, birlabasho bir ah ayaa ku filan. Haddii aan ogahay inaan xiranayo jaakad, xitaa dhib kuma qabo feereynta. Xirmooyinka waxay soo baxayaan 30 daqiiqo gudahood haddii aan xirto jaakad suud ah.
Jun 23, 2009 saacadu markay ahayd 1:21 AM
hab kale - u soo jiid hal gacan oo jaakadda ah dibedda, una sii wad si aad hal garab ugu haysato gudaha. Gacanta kale ka mari gacanta gudaheeda. Garabka garabka waa in la isku dhejiyaa. Kadib duub jaakada.
Walaalaha Brooks shaatiga xorta ah ee duuduubku waa kuwa ugu fiican - iyagu ma duuduubnaadaan.